” လေးနကျတဲ့အဓိပ်ပာယျတှနေဲ့ နနျးဆု ရဲ့ ဖုနျးကာဗာလေး “ – Cele Gabar
” လေးနကျတဲ့အဓိပ်ပာယျတှနေဲ့ နနျးဆု ရဲ့ ဖုနျးကာဗာလေး “
လှပတဲ့အသားအရနေဲ့ အရုပျမလေးပမာ လှရကျလှနျးသူ ရှမျး၊တရုတျကပွားမလေး နနျးဆုရတီစိုးရဲ့ (၂)နှဈကြျော လကျတှဲလာတဲ့ အခဈြရေးကတော့ အခွအေနတှေတေငျးမာနတောလညျးဖွဈပါတယျ။လကျရှိ သူရဲ့အခဈြရေးအခွအေနကေို ထငျဟပျနသေယောငျ စာလေးတဈစောငျနဲပအတူ ဖုနျးကာဗာလေးကို ဖစျေ့ဘှတျချအကောငျ့ My Day မှာတငျထားပါတယျ။တငျထားတဲ့ စာလေးကတော့ ” သဝထေိုးခခှေးယပငျ့”ခြေ” ဆိုတဲ့စကားလုံးထကျ ကြှနျမကပိုခနြေိုငျပါသေးတယျ။အခဈြကကြှနျမအတှကျတော့ အရေးမပါခဲ့ပါဘူး။ဒါပမေဲ့”သူ” ဆိုတဲ့သူဝငျလာပွီးတဲ့နောကျ ကြှနျမအတှကျ အရမျးနကျရှိငျးတဲ့ခံစားခကျြတှေ အခဈြအမုနျးအလှမျးတှသောမက သံယောဇဉျတှေ “အိုးးးးးးစုံနတောပါရှငျ့”….
အခြိနျတှကွောခဲ့ပါပွီ ဒါတှမေပွောတော့ပါဘူး အခုလဲကြှနျမအတှကျတော့ အခဈြမလိုတော့ပါဘူးလေ။ဒါပမေယျ့ ကြှနျမခံစားခကျြတှကေို ဒီမှာပါဝငျတဲ့ဖုနျးကာဗာလေးတှကေ ပွောပွပါလိမျ့နျော။အမုနျးဆိုတဲ့နောကျကှယျမှာ တကယျတမျးတော့အခဈြရှိပါသေးတယျ။တဈခြိနျတုနျးက “နငျ့ကိုငါခဈြတယျ” ဆိုတဲ့စကားဟာ အခုခြိနျထိအသကျဝငျနတေုနျးပါပဲ ရှငျရယျ…..ဒီကာဗာလေးတှထေဲမှာ ကြှနျမရဲ့ရှငျ့အပျေါထားတဲ့ အခဈြတှအေမုနျးတှထေညျ့ပေးထားပါတယျ။ရှငျ့ကိုနောကျဆုံးအနနေဲ့ ပွောခငျြတဲ့ စကားတဈခှနျးကနျြသေးတာမို့လို့ ရှငျဒီဖုနျးကာဗာလေးမှာပဲ အဖွရှောကွညျ့လိုကျတော့နျော။” ဆိုတဲ့ လေးနကျတဲ့အဓိပ်ပာယျတှနေဲ့ တငျထားပါတယျ။
နနျးဆုတဈယောကျကတော့ (၂)နှဈကြျောလကျတှဲလာတဲ့ ခဈြသူ အဆိုတျော G-Fatt နဲ့အတူ အရငျကလို့ ပှဲတတျတာတှေ တှဲသှားတှဲလာတှေ သိပျမရှိတော့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှကေတော့ အနအေေးနတေဲ့ သူတို့အခဈြရေးကို စိုးရိမျနကွေတာလညျးဖွဈပါတယျ။CeleGabar ပရိသတျကွီးရေ နနျးဆုတဈယောကျရဲ့လေးနကျတဲ့အဓိပ်ပာယျတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ ဖုနျးကာဗာထဲက နောကျဆုံးအနနေဲ့ ပွောခငျြတဲ့ စကားတဈခှနျးကဘာဖွဈမလဲ။
” လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ နန်းဆု ရဲ့ ဖုန်းကာဗာလေး ”
လှပတဲ့အသားအရေနဲ့ အရုပ်မလေးပမာ လှရက်လွန်းသူ ရှမ်း၊တရုတ်ကပြားမလေး နန်းဆုရတီစိုးရဲ့ (၂)နှစ်ကျော် လက်တွဲလာတဲ့ အချစ်ရေးကတော့ အခြေအနေတွေတင်းမာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ သူရဲ့အချစ်ရေးအခြေအနေကို ထင်ဟပ်နေသယောင် စာလေးတစ်စောင်နဲပအတူ ဖုန်းကာဗာလေးကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အကောင့် My Day မှာတင်ထားပါတယ်။တင်ထားတဲ့ စာလေးကတော့ ” သဝေထိုးခခွေးယပင့်”ချေ” ဆိုတဲ့စကားလုံးထက် ကျွန်မကပိုချေနိုင်ပါသေးတယ်။အချစ်ကကျွန်မအတွက်တော့ အရေးမပါခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့”သူ” ဆိုတဲ့သူဝင်လာပြီးတဲ့နောက် ကျွန်မအတွက် အရမ်းနက်ရှိင်းတဲ့ခံစားချက်တွေ အချစ်အမုန်းအလွမ်းတွေသာမက သံယောဇဉ်တွေ “အိုးးးးးးစုံနေတာပါရှင့်”….
အချိန်တွေကြာခဲ့ပါပြီ ဒါတွေမပြောတော့ပါဘူး အခုလဲကျွန်မအတွက်တော့ အချစ်မလိုတော့ပါဘူးလေ။ဒါပေမယ့် ကျွန်မခံစားချက်တွေကို ဒီမှာပါဝင်တဲ့ဖုန်းကာဗာလေးတွေက ပြောပြပါလိမ့်နော်။အမုန်းဆိုတဲ့နောက်ကွယ်မှာ တကယ်တမ်းတော့အချစ်ရှိပါသေးတယ်။တစ်ချိန်တုန်းက “နင့်ကိုငါချစ်တယ်” ဆိုတဲ့စကားဟာ အခုချိန်ထိအသက်ဝင်နေတုန်းပါပဲ ရှင်ရယ်…..ဒီကာဗာလေးတွေထဲမှာ ကျွန်မရဲ့ရှင့်အပေါ်ထားတဲ့ အချစ်တွေအမုန်းတွေထည့်ပေးထားပါတယ်။ရှင့်ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကျန်သေးတာမို့လို့ ရှင်ဒီဖုန်းကာဗာလေးမှာပဲ အဖြေရှာကြည့်လိုက်တော့နော်။” ဆိုတဲ့ လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ တင်ထားပါတယ်။
နန်းဆုတစ်ယောက်ကတော့ (၂)နှစ်ကျော်လက်တွဲလာတဲ့ ချစ်သူ အဆိုတော် G-Fatt နဲ့အတူ အရင်ကလို့ ပွဲတတ်တာတွေ တွဲသွားတွဲလာတွေ သိပ်မရှိတော့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကတော့ အနေအေးနေတဲ့ သူတို့အချစ်ရေးကို စိုးရိမ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ နန်းဆုတစ်ယောက်ရဲ့လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ ဖုန်းကာဗာထဲက နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကဘာဖြစ်မလဲ။
“သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ အစ္စဏီရဲ့ အမှုကို အမှုကျေးအေးပေးလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်စူးရှထက်ကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောလိုက်တဲ့ ယုန်လေး”
ရှိန်းတင်ထူးကို Crush နေတာလားလို့မေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအလှမယ်လေး လင်းထက်ထက်ကျော်
“ရိုကျကူးပွီးစီးသှားပွီဖွဈတဲ့ နိုငျငံ(၄)နိုငျငံရဲ့ ပူးပေါငျးပုံဖျောတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး”